kuusdeetaa argachuuf JDBC adda baasi.
Kutaa ooftuu JDBC fayyadamtee LibreOffice waliin kuusdeetaa JDBC walqabsiisuu dandeessa. Kutaan ooftuu oomishaa kuusdeetaa irra argama. Fakkeenyoonni lama kan JDBC Oracle and MySQL dha.
Gahiinsa kuusdeeta Oraakilii Solaris ykn Linux irraa ooftuu JDBC fayyadamuu ni dandeessa. Foddaa irraa kuusdeetaa gahuuf, ooftuun ODBC ni barbaachiisa dha.
Saanduqa Madda Deetaa URL keessatti, bakka kaadhimaa kuusdeetaa oraakilii galchi. Caasimni URL gosa kuusdeetaa irratti hundaa'a. Odeeffannoo irra caaluuf galmee ooftuu JDBC waliin dhufe ilaali.
Kuusdeetaa Oraakiliif, caasimni URL kan ta'u:
Maqaan affeertuu maqaa maashinaa kan kuusdeetaa Oraakili kaasuu dha. Yoo barbaadde maqaa affeertuu teessoo IP kaadhimaan bakka buusuu dandeessa.
Buufatni iddoo kuusdeetaa Oraakili itti dhageeffatamuu dha. Teessoo buufataa isa sirriif bulchaa kuusdeetaa kee gaafadhu.
database_name maqaa kuusdeetaa Orakilii dha. Maqaa isa sirriif bulchaa kuusdeetaa kee gaafadhu.
Ooftuun kuusdeetaa MySQL weebsaayitii MySQL irratti argama.
Caasimni kuusdeetaa MySQLf:
maqaan affeertuu maqaa maashinaa kan kuusdeetaa MySQL kaasuu dha. Yoo barbaadde maqaa affeertuu teessoo IP kaadhimaan bakka buusuu dandeessa.
buufatni kuusdeetaa MySQL dhaaf buufata durtiiti, maqaan isaas 3306.
database_name maqaa kuusdeetaati.
Madda deetaa URL
Kutaa oofaa JDBC
Qindaa'inoota amma waliin walindhaa yaala.
Title is: Walindhaa JDBC